The Ab Presents Nepal » १५ बर्षको उमेरमै होटल चलाउने यी बहादुर बालकहरु, आफ्नो पिडा सम्झेर भए भावुक!
१५ बर्षको उमेरमै होटल चलाउने यी बहादुर बालकहरु, आफ्नो पिडा सम्झेर भए भावुक!
६ असार २०७६, काठमाडौँ- : जीवनमा केही बन्न र केही पाउनको लागि हामीले पक्कै पनि दुख गर्नैपर्छ । तर केही व्यक्ति यस्ता पनि छन् जसले लाउलाउ खाउखाउ भन्ने उमेरबाट नै गुजारा चलाउनको लागि मेहेनत गरिरहेका हुन्छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यहि कुराको उदाहरण बनेर भाइरल भैरहेका छन् १५ बर्षिया राजु घिसिङ र प्रवल घिसिङ ।
रामेछाप घर भएका राजु र प्रवलले अहिले सबैलाई चकित बनाइदिएका छन् । यति सानो उमेरमै यी बालकले होटल चलाएर बसेका छन् । होटेलमा आफै पकाउने देखि सर्भिस गर्नेसम्म यी बालकले गर्ने गरेका छन् । उनीहरु होटल चलाउँछन् र सँगसँगै पढाई पनि गर्दैछन् । सुरुमा यी बालकले काठमाडौँ आउँदा अरुको होटलमा भाडा माझ्ने काम गर्थे ।
होटलमा सुरुमा भाडा माझ्दा यी बालकले अरुको निकै हेपाई पनि सहनु परेको थियो । राजु र प्रवलले विहान ५ बजे नै होटल खोल्ने गरेका छन् । विहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरुको होटल पुरै प्याक हुन्छ । त्यहाँ आउने ग्राहकले उक्त होटलको सम्पूर्ण खानेकुरा निकै सफा र मिठो हुने पनि बताएका छन् । राजु र प्रवल धेरैको लागि प्रेरणा बनिरहेका छन् । यति सानो उमेरमा राजु र प्रवलले यतिधेरै मेहेनत गरिरहेका छन् । राजु र प्रवल भविष्यमा निकै ठूलो स्थानमा पुग्नेछन् ।
प्रकाशित मिति June 21, 2019